Shacabka ku sugan Istanbul waxay isha ku hayaan noole caan ka dhex noqday bulshadaas. | Dayniile.com
Home Warkii Shacabka ku sugan Istanbul waxay isha ku hayaan noole caan ka dhex...
Shacabka ku sugan Istanbul waxay isha ku hayaan noole caan ka dhex noqday bulshadaas.
Maalmahan rakaabka ku sugan Istanbul waxay isha ku hayaan noole caan ka dhex noqday bulshadaas.
Waa ey ku nool waddooyinka, oo lagu magacaabo Boji, kaas oo jecel inuu ku safro gaadiidka ee magaalada ugu weyn Turkiga.
Qofna ma oga sida uu u bartay nidaamka ku safarka gaadiidka dadweynaha. Laakiin darawal kaxeeya mid ka mid ah basaska korontada ku shaqeeya ayaa sheegay in ay yaqaaniin Boji, sidoo kalena in asluubtiisa iyo akhlaaqdiisa marka uu fuulayo iyo ka degaya baabuurkiisa ay tahay inuu tusaale u noqdo dhammaan rakaabka aadanaha.
Waxa uu jecel yahay safridda ?
“Waxay la mid tahay inuu ujeedo leeyahay.”
Hadda waxa uu haystaa aalad uu wax kula socdo?
Aalad kale oo birlab ah oo ku xiran app-ka mobaylka waxa uu u ogolaanayaa masuuliyiinta in ay la socdaan xaalkiisa caafimaad.
Shaqaalaha gaadiidka ayaa u magac bixiyey ?
Waa ey caan baxay
Xayawaankan ka duwan kuwa kale ayaa ah arrin hadalhayn leh ku noqday dadka deggan Istanbul.
Previous articleTiradii ugu badneyd oo Soomaali ah oo ka qeyb galeysa siyaasadda Mareykanka
Next articleShirka Cimilada Adduunka oo ka furmay Glasgow Scotland ee dalka UK
Waxaa goor dhawayd magaalada Muqdisho soo gaaray ku dhawaad 11 gaari oo kasoo baxay furimaha dagaalka ee Shabeelaha Dhexe. Wararka ayaa sheegaya in Ciidamadaan ay...
Booliska Kenya oo faahfaahin ka bixyeen weerar ay geysteen Al-Shabaab
Maxamed Bin Salmaan oop bilaabaya booqasho uu ku tagayo dalalka Khaliijka...
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Ururrada Bulshada Rayidka